Jimciyadda ASAL oo siminaar lagu baranayo Wadaniyadda u qabatay Arday – Radio Muqdisho
Jimciyadda ASAL oo siminaar lagu baranayo Wadaniyadda u qabatay Arday
Siminaarkan oo socday muddo 9 cisho ah, islamarkaana lagu baranayay wadaniyadda oo ay soo qaban qaabisay Jimciyadda ASAL, ayna ka faa’iideysteen in ka badan 5-boqol arday oo ka qalin badalaeysa dugsiyada sare ee dalka ayaa maanta lagu qabtay xarunta Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Afhayeenka Jimciyadda ASAL Axmed Shire Ciise oo ka hadlay siminaarka ayaa sheegay in Jimciyadda ay u taagantahay isku xirka ardayda ku hadashay afka hooyo, waxaana uu intaa ku daray in ay sii wadayaan siminaarada kuwan oo kale ee lagu kobcinayo aqoonta ardayda Soomaaliyeed.
“Jimciyadda ASAL waa isku xiraha ardayda ku hadashada Afka hooyo, tan kale siminaarkan waxa ay ila tahay in ardaydu ay wax badan ka faa’iideysteen, maadaama uu xambaarsanyahay macluumaad aa u weyn oo dhanka Wadaniyadda ah, waxaan rajeynaynaa in aan joogteyno siminaarada nuucaani oo kale ah” ayuu yiri Afhayeenka ASAL.
Dr Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Maxamed Badawi oo bixinayay casharada siminaarka lagu baranayay Wadaniyadda ayaa sheegay in siminaarkan uu ahmiyad gaar ah ugu fadhiyo bulshada Soomaaliyeed, isla markaana ah qadiyad loo baahanyahay in la baro ardayda Soomaaliyeed muhiimadda ay u leedahay wadaniyadda.
“Qofka Wadaniyadda ah waxaa la rabaa in uu jeclaado dalkiisa oo uu ka shaqeeyo horumarka, dib u dhiska iyo ka ilaalinta waxkasta oo dalka wax u dhimaya, sidoo kale qofka waxaa laga rabaa in uu bixiyo canshuurta, si uu u helo adeegyada aas aasiga u ah bulshada” ayuu Dr Badawi hadalkiisa ku daray.
Qaar ka mid ah ardaydii ka faa’iideysanasay siminaarka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin ka qeb galka siminaarka, isla markaana ay ka faa’iideeyn wax badan oo ku saabsan wadaniyadda.
Jimciyadda ASAl oo ah jimcad u taagan sidii ay ardayda ka qalinjebineysa dugsiyada sare ugu samen lahaayen siminaaro kor loogu qaadayo aqoontooda ayaa horey sidaan oo kale siminaarro u qabatay arday siminaaro ka hadlaya hogaanka wanaagsan, iyadoo siminaarkii maanta uu ka duwanaa kuwii ay horey u qaban jireen.
Kaalinta Bulshada ee xoojinta Ammaanka Dhageyso